Kooxda Barcelona oo isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso saddex ka mid ah xiddigaha RB Leipzig – Gool FM
Kooxda Barcelona oo isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso saddex ka mid ah xiddigaha RB Leipzig
(Barcelona) 15 Mar 2020. Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku hayso kooxda RB Leipzig oo ay ka doonayso saddexda ciyaaryahan ee kala ah; Dayot Upamecano, Timo Werner iyo Angelino.
Leipzig ayaa ku riyaaqday kal ciyaareed fiican oo Bundesliga ah ka hor dib u dhigista horyaalka sababo la xiriira caabuqa coronavirus, maadaama ay kaalinta saddexaad kaga jiraan liiska kala sarreynta, iyagoo shanta dhibcood ee ka dambeeya hoggaamiyaasha horyaalka ee Bayern Munich.
Mustaqbalka dhowr ka mid ah ciyaartoydooda sar-sare ayaa su’aal laga keenay dhowaan, iyadoo Werner uu weli si aad ah loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Liverpool, waxaana la sheegay in Upamecano uu diiradda u saaran yahay Arsenal.
Sida laga soo xigtay Jariiradda Mundo Deportivo ee ka soo baxda dalka Spain, agaasimaha farsamada Barcelona ee Eric Abidal waxa uu u diray kaaliyihiisa Ramon Planes si uu u soo indho-indheeyo saddexdan laacib ee wareegga 16-ka Champions League kala daray kooxda Tottenham Hotspur, taasoo kooxda Julen Nagelsmann ay wadar ahaan labada lug 4-0 kaga kaga soo baxeen kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in Barca ay qorshayneyso inay xoojiso daafaceeda iyo weerarkeeda ka hor xilli ciyaareedka soo socda, waxaana ciyaartoyda Leipzig la sheegay inay yihiin xulasho soo jiidasho u leh kooxda Quique Setien.
Si kastaba ha noqotee, fursadaha indho-indheeynta ayaa si aad ah loo xaddiday, iyadoo ay ugu wacan tahay dib u dhigyada ciyaaraha kaddib faafitaanka laga qabo caabuqa coronavirus.
Lionel Messi oo ka murugeysan xaaladda Ronaldinho… (Miyuu isku dayi doonaa inuu Xabsiga ka soo saaro?)